INDAWO YONIKEZWA YABANANDA - I-Airbnb
INDAWO YONIKEZWA YABANANDA
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguShyamanta
Indawo yokuhlala ethandekayo yekhaya / indlu yeendwendwe kwindawo ekhuselekileyo enoxolo kufutshane neGymkhana Club Jorhat Assam. Umoya unobubele kakhulu kwaye usekhaya.
Izinto eziluncedo: Ubungakanani begumbi yi-300 ye-square Feet. I-air conditioning, iCable TV, Umatshini wokuhlamba, ibhedi enkulu yendlovukazi, amanzi ashushu nabandayo, iRO filter egumbini
Indawo entle enomoya yokuhlala / indlu yeendwendwe kwindawo ekhuselekileyo enoxolo kufutshane neGymkhana Club Jorhat Assam. Yeyokuqala indawo yokuhlala eJorhat. Umoya unobubele kakhulu kwaye usekhaya. Siye sabamba iindwendwe ezininzi zamazwe ngamazwe kunye nezesizwe kude kube ngoku kunye nophononongo olonwabileyo.
Izinto eziluncedo: Ubungakanani begumbi yi-300 ye-square Feet. Kukho unxibelelwano lweTV kunye nesitya seTV, i-Air Condition, amanzi ashushu nabandayo, umatshini wokuhlamba, amanzi ahluziweyo simahla (ngesicelo) nangona sifake isicoci samanzi kwangoko egumbini, I-ayina enebhodi ye-Iron, ifriji yebha, isofa yeCane. . Ine queen size bed ene TV kunye nendlu yangasese eqhotyoshelweyo ecocekileyo. Ifulethi elizisebenzelayo ngokupheleleyo. Igumbi lifakwe iithayile zevitrified. Ukupaka imoto enye kuyafumaneka. Ijimu encinci ikwindawo, kunye nenkundla encinci yebhasikithi.
Yindlu yeendwendwe ezizenzela yona siyayixabisa ukuba undwendwe lusebenzisa ikhitshi elikwigumbi siya kukubonelela ngezixhobo zokupheka.
Kwimeko yokuhlala ixesha elide, isaphulelo singathethathethwana. Umntwana omnye okanye ababini abangaphantsi kweminyaka eyi-10 banokuhlala nawe, ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo.
Umtsalane okufutshane yiKaziranga 100 km kude (iyure e-1 nemizuzu engama-40 ngemoto). Esona siqithi sikhulu somlambo emhlabeni iMajuli ziikhilomitha ezili-15 (umntu kufuneka ahambe ngesikhephe ukuya apho oko kumalunga nohambo lweyure enye). Ubukumkani obudumileyo buka-Ahom, iSibsagar ziikhilomitha ezingama-52 (iyure enye yokuqhuba). Indawo yasendle yaseGibbon ikumgama oziikhilomitha ezili-15. Isikhululo sikaloliwe saseJorhat sikumgama weekhilomitha ezi-2 kwaye indawo yokumisa iibhasi (ISBT) ikumgama weekhilomitha ezi-5. Umgama ukusuka kwiSikhululo seenqwelomoya yi-6 km. IBaazar enkulu ikumgama nje oyi-3km ukusuka kwindlu yeendwendwe
Yindawo ezolileyo ecocekileyo nenobubele u-Cook uya kubonelelwa njengenkonzo encomekayo UMXHOLO WOKUFUMANEKA KUNYE ISAZISO ESIPHAMBILI.
Siyakuqinisekisa ngesivumelwano esingcono eJorhat kwindawo enjalo kunye nexabiso.
Yindlu yeendwendwe ebhalisiweyo/yokuhlala eKhaya ke ngoko kungabikho miba ekubhukisheni abantu bamanye amazwe njengoko ikhuseleke kakhulu. Ngoku sinikezela ngenkonzo yeCab enexabiso eliphezulu kakhulu. Kwimeko apho uziva ungathandi ukwenza ukutya kwakho, zininzi iinkonzo zokuhanjiswa kwekhaya onokuthi uodole kuzo.
Sikwabonelela ngokhenketho lwegadi yeti/ indawo yasendle yaseGibbon yokhenketho lwenkawu eMariani, ukhenketho losuku olunye ukuya eMajuli naseSibsagar. Kwakhona sinebhayisekile enye ekufuneka siyiqeshile
Ubumelwane buyindawo yokuhlala eJorhat kufutshane kakhulu neGymkhana iklabhu yegalufa. Indawo yayo yesi-3 yeyona khosi yegalufa indala ehlabathini. Kufuphi kukwakho nelona ziko loPhando leti elidala nelikhulu elibizwa ngokuba yiTocklai. Ngokuphathelele ukubizwa kwesixeko, i-Jorhat iza "njengendawo ephakathi kweminqwazi emibini ("imarike" ngolwimi lwendawo)" Ubuninzi bokuthenga bunokuba bulungele ukuphuma kosapho. Iivenkile zibekwe ikakhulu eBabbu Patty, Old Balibat, Bahadur Gaon Bura indlela (entsha Balibat), Chowk Bazar, Gar Ali, JPR Road, Kachori Gali(Radhiya babu Lane), KB Road, Rupahi Ali, Nirmal Chariali, Marwari Patty. kunye neMitha Pukhuri Road.
Iivenkile ezinkulu kwisixeko saseJorhat zezi:-
I-Big Bazaar mall, indlela ye-KB; I-Sohum Shoppe, emva kweMibala eManyeneyo yaseBenneton, iTarajan, i-AT Road; iMaxmart mall, eRajamaidam Road; Vishal Mega Mart, Lahoti Road; Ragga, KB Road. Kwaye iindawo ezinkulu ezisakhiwayo zezi:- iCosmos mall, kufutshane neRaymonds showroom, PWD road
I-Doss kunye ne-Co., Indlela ye-KB (Ivenkile yesebe yoku-1 kumntla-mpuma we-Indiya yasekwa ngo-1910 e-Jorhat) oovulindlela esixekweni ukususela kumaxesha asusela emva ekusekweni koMthengi Jikelele wodidi oluphezulu kunye nodumo kwinkonzo yabathengi.
Umbuki zindwendwe ngu- Shyamanta
Ewe, ukuba ndilapho ndiya kuthanda ukusebenzisana kwaye ndikuncede ukuze uhlale kamnandi, nangona amaxesha amaninzi bendidla ngokujikeleza. Nangona ndingakunceda ngomnxeba xa ndingekho. Kodwa abazali bam bahlala kumgangatho ophantsi, utata uthetha isiNgesi kwaye uya kukuvuyela ukusebenzisana kunye nokukunceda.
Ewe, ukuba ndilapho ndiya kuthanda ukusebenzisana kwaye ndikuncede ukuze uhlale kamnandi, nangona amaxesha amaninzi bendidla ngokujikeleza. Nangona ndingakunceda ngomnxeba xa nding…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Jorhat